Abantu Abadala | Impilo Yengqondo Texas
Inqubo yokuguga ingaba yomibili futhi izuzise. Lesi sikhathi empilweni singasetshenziselwa ukujabulela umhlalaphansi, amaholide, izinto zokuzilibazisa, noma isikhathi esithe xaxa nomndeni. Ngenkathi abaningi bebheke phambili eminyakeni yabo yegolide, abantu abadala asebekhulile kungenzeka ukuthi babhekane nezinkinga ezinkulu zezempilo, ubunzima bokuzinza kwezezimali, noma izinselele zokuziphatha.
Ingxenye yokukhula ihamba ngezinguquko kanye nokuhlangenwe nakho okwabiwe ngabanye esigabeni esifanayo empilweni. Izinguquko ezinjengokuthatha umhlalaphansi zingavula iminyango ezintweni ezintsha, kepha futhi zingacindezela kakhulu. Abanye bakuthola kunzima ukwenza izinguquko futhi balwa nemizwa yokungabi nanjongo noma isizungu.
Kwesinye isikhathi, imizwa yesizungu nokuphelelwa yithemba kungaholela ekukhathazekeni okukhulu, njengokucindezeleka. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukucindezeleka kuyinto engalindelwa lapho bekhula. Lokhu akukwazi ukuqhubeka neqiniso. Njengoba abantu bekhula, bahlangabezana nezinguquko ezinzima. Kujwayelekile ukuthi umuntu osekhulile azwe usizi, usizi, noma izinkathi zamandla aphansi, njengabanye abaningi. Kodwa-ke, abanye bazozwa imizwa ehlala isikhathi eside kakhulu kunemizwa yesikhashana yokudabuka. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi lokhu kubukeka kanjani.
Kwesinye isikhathi, ukudangala kuyashaywa indiva noma kuphuthwe ngakho ukuwohloka komqondo . Ngakho kokubili ukudangala kanye nokuwohloka komqondo, ukwenza imisebenzi yansuku zonke njengokuhlanza, ukupheka, ngisho nokugqoka kungaba yinselele enkulu ukuphatha.
Kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abadala banikezwe ukuhlolwa okuphelele kokuxilongwa ngongoti abafanele bezokwelapha. Abantu asebekhulile bangazuza kubantu ababathandayo ababamela egameni labo ngezindlela ezingcono kakhulu zokwelashwa nokunakekelwa lapho kusolakala ukuthi ukuwohloka komqondo noma ukucindezeleka. Futhi, ukugcina impilo yomzimba nokuhlala usebenza ngokwengqondo nangokwenhlalo kungasiza kakhulu ngokomqondo nasemzimbeni.
Abantu abadala abaneminyaka engama-65 noma ngaphezulu bavikelwe ngumthetho waseTexas ekuhlukunyezweni. Ukuhlukunyezwa kwabantu abadala kungafaka ukuhlukunyezwa ngokomzimba, ukuhlukunyezwa ngokocansi, ukuxhashazwa, ukuhlukunyezwa ngokomzwelo kanye / noma nokuhlukunyezwa ngokwengqondo. Kubalulekile uku ziqaphele izimpawu yalezi zinhlobo ezahlukene zokuhlukumeza ngakho-ke uma uzibona zenzeka, ungabika kuziphathimandla ezifanele.
Uma usola ukuthi ukuhlukunyezwa kwabantu abadala kuyenzeka, sicela ubike eMnyangweni Wezinsizakalo Zokuzivikela Komndeni ngokushayela ucingo kule nombolo yocingo yamahhala, yamahhala yamahora angama-24 1-800-252-5400 kusuka noma yikuphi e-United States ukubika ukuhlukunyezwa noma ukunganakwa okwenzeke eTexas. Nawe unga bika online .
Ukuze ufunde kabanzi ngokuvimbela ukuhlukunyezwa kwabadala, vakashela http://www.dfps.state.tx.us/Everyones_Business/default.asp .
Imininingwane engaphezulu Yabantu Abadala Abathola Izimpawu Zezimo Zempilo Yengqondo:
Kunezinsizakusebenza eziningi ezitholakalayo zabantu abadala asebekhulile abanezimpawu zezimo zempilo yengqondo nemindeni yabo. Vakashela:
ITexas Health and Human Services (HHS) yezinsizakalo zezempilo zabantu abadala ezitholakala kuhulumeni .
ITexas Health and Human Services (HHS) yezinsizakalo ezitholakala kuhulumeni .
Ikhasi lewebhu le-National Institute of Mental Health (NIMH) ukuthola eminye imininingwane ngabantu abadala kanye nokudangala .
Incwajana ephrintiwe yeNational Institute of Mental Health (NIMH) kubantu abadala kanye nokudangala .
Ukuguga kweTexas Well uhlelo lweTexas Health and Human Services olusiza amaTexans ukuthi alungiselele zonke izici zokuguga ezingeni lomuntu ngamunye, emphakathini nasezweni.
I-American Psychological Association (APA) ukuthola eminye imininingwane nezinsizakusebenza .
I-SAMHSA yokushicilelwa kwabahlinzeki .
I-World Health Organization –
Imininingwane ngabantu abadala kanye nezimo zempilo yengqondo .
Ishidi Leqiniso Lokuwohloka Komqondo .
Inkambo Yokuguga Nempilo .
Imodyuli Yokuqwashisa Ngezempilo ekuziphatheni okuku-inthanethi ngokuguga kanye nempilo yokuziphatha .